minthantzaww: Facebook ပြသာနာအဖြေရှာ via IT Reshare Site by
Facebook ပြသာနာအဖြေရှာ via IT Reshare Site by SB.Sangpi(စံပီး) on 8/18/10
Facebook မှာ လူတွေများလာတာနဲ့ အမျှ ပြသာနာတွေလဲ ပေါများလာပါတယ်..ဒီမှာထဲ တခုကို ပြောပါချင်ပါတယ်။ Facebook ကနေပြီးတော့ ကိုယ်ကိုလာ ADD လာတဲ့ Friends တွေကများတော့ ကိုယ့်ကအားလုံးကိုရောပြီးလုပ်ခံလုပ်မိတယ်..ဒါပေမဲ့ သူက ကိုယ့်ကိုမကောင်း ပြောလာတယ်. .မဟုတ်တာတွေကိုယ့်ဆီမှာစာတွေရေးလာလို့..ကိုယ့်က သူကို Block (or) Report , remove from friends ဆိုပြီးတော့..ရှိပါတယ်.ထိရောက်မှုကတော့..ပြင်းထန်ပါတယ်... Report လုပ်မယ်ဆိုရင် option တွေရှိပါတယ်.ဒီ account ပိုင်ရှင်ဟာ..ညစ်ညမ်းတဲ့စကားတွေပြောလား ၊ကိုယ့်ကိုခြိမ်းခြောက်လား၊ကိုယ့်ကို ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံတွေပြနေလား။ Account ပိုင်ရှင်ဟာ Account ကိုအတုလုပ်ထားတာလား။ ကိုယ်မဆက်သွယ်ခြင်တဲ့ လူလား..စတဲ့..သေးစိတ်ကျတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်..ဆိုတော့..လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကို ပုံနှင့်တကွအောက်မှာStep(1) ကိုယ့် Block (or) Report လုပ်ခြင်တဲ့ လူရဲ့ Profile ကိုသွားပါ။Step(2) ဒီ Profile ဓာတ်ပုံရဲ့အောက်ဆုံးတည့်တည့်နားလေးမှာ
မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဘဲ..Report/Block this person ပြီးတော့ Remove From friends ဆိုပြီးရှိပါတယ်။Step(3) Report/Block this person ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ box လေးတခုကျလာပြီးမေးပါလိမ့်မယ်။Step(4) ကိုယ့်က Block လုပ်ချင်တာဆိုရင် Block this person ဆိုတဲ့ box လေးကို click လိုက်ပါ။Step(5) ပြီးတော့ အောက်ဆုံးက I have reviewed ဆိုတဲ့ အရှေ့က box လေးကို click ပါ။Step(6) ပြီးနောက် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီး။
အကယ်၍ ကိုယ့်က သူကို block ချင်တာသက်သက်ဘဲမဟုတ်ဘဲ၊ သူရဲ့ မကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တခုခုကိုFacebook မှာအကြောင်းကြားခြင်တယ်.ဆိုရင်.အောက်ပါနည်းStep(1) ကိုယ့် Report လုပ်ချင်တဲ့ လူရဲ့ Profile ကိုသွားပါ။Step(2) ဒီ Profile ဓာတ်ပုံရဲ့အောက်ဆုံးတည့်တည့်နားလေးမှာ
မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဘဲ..Report/Block this person ပြီးတော့ Report/Block this person ဆိုပြီးရှိပါတယ်။Step(3) Report/Block this person ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ box လေးတခုကျလာပြီးမေးပါလိမ့်မယ်။Step(4) ကိုယ့်က Report လုပ်ချင်တာဆိုရင် Report this person ဆိုတဲ့ box လေးကို click လိုက်ပါ။Step(5) ပြီးတော့သူ့အောက်တည့်တည့်မှာ Reason မှာ ကိုယ့်ခံရတဲ့အချက်ကို(options)ရွေးပေးပါStep(6) ပြီးတော့ အောက်ဆုံးက I have reviewed ဆိုတဲ့ အရှေ့က box လေးကို click ပါ။Step(7) ပြီးနောက် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီး။
Note:ဒီမှာရှိတဲ့ Options တွေထဲမှာ Remove from Friend ဆိုတဲ့ option ကတော့ သူကို သူငယ်ချင်အဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူကိုပြန်အပ်လို့ရပါတယ်။
offline ဘော်ဒါတွေထဲက ကိုယ့်ကို ဘလော့လုပ်ထားတယ်လို့ သံသယရှိသူကို သူ့နာမည်ပေါ် Right click ခေါက်ပီး Get Info လုပ်ကြည့်ပါ။ အောက်ကပုံလို Full name နဲ့ Photo (ပုံ) တို့ ဘာတို့ တွေ့မြင်ရရင်… သူက offline သက်သက် ဖြစ်နေတာ ကိုယ့်ကို ဘလော့ထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိသာပါတယ်။ (ဟူး…တော်ပါသေးရဲ့)
အဲ့… Get Info လုပ်ကြည့်လို့ အောက်ကပုံလို ဗျောင်ချည့် (ဒါမှမဟုတ်) Status offline တစ်ကြောင်းတည်း ပေါ်လာရင်တော့ သေချာပါတယ်။ သူ ကိုယ့်ကို ဘလော့ထားတာပဲ။
သူ ကိုယ့်ကို မခင်ရင် ကိုယ်လည်း မခင်ဘူးပေါ့ဗျာ..။ တဘက်သတ်ကြီး ဘလော့ခံရတာထက်စာရင် ကိုယ်လည်း သူ့ကို ပြန်ဘလော့မှာပေါ့။ ဘဲစားဘဲကျေပဲ…။ အဲ့တာ အေးကရော…။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြန်မကျေအေးမချင်း (နှစ်ဘက်စလုံးက ပြန်ပြီး unblock မလုပ်မချင်း) အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့တော့ဘူးသာ မှတ်ပေရော့ပဲ…။
ဒါမှမဟုတ် သူ့ကို ကိုယ့် Contact List ထဲကနေ Remove လုပ်ပလိုက်လည်း အေးတာပဲ…။ ပြန် အင်ဗိုက်မလုပ်မချင်း မတွေ့တော့ဘူးပေါ့…။
from မြန်မာလို နည်းပညာ စာအုပ်များ
Gtalk နှင့်ပတ်သက်သမျှ စာအုပ်ပါ
Please don't forward any political, racial, religious and sexual emails to me. Thanks.
You can forward me emails such as technological (engineering and IT) emails. Thanks.
If you want to beafriend with me, just send invitation to lwan.nay.ya.thu.par@gmail.com
If you want to read the ebooks or listen songs, please send email to me, when I have the free time, I will
Posted by minthantzaww at 01:40
Labels: Facebook ပြသာနာအဖြေရှာ
ကျေးဇူးနော် ကိုသန့် မျှဝေပေးလို့....... ပျော်ရွှင်ပါစေနော်
14 August 2011 at 07:01